यस्तो ओला इलेक्ट्रिक कार आउदैछ, छिटै बजारमा आउने, हेर्नुहोस् कस्तो छ यो कार ? « Etajakhabar
यस्तो ओला इलेक्ट्रिक कार आउदैछ, छिटै बजारमा आउने, हेर्नुहोस् कस्तो छ यो कार ?
ओला इलेक्ट्रिकले २०२३ मा कुनै समय ब्याट्री-इलेक्ट्रिक कार लन्च गर्ने योजना बनाएको छ, ओलाका सीईओ भाविश अग्रवालले ट्विटरमा आगामी ओला इलेक्ट्रिक कारको तस्वीर साझा गरेका छन्। EV आगामी ओला ई-कारको डिजाइन अवधारणा जस्तो देखिन्छ, जुन एक स्टाइलिश ब्याट्री-इलेक्ट्रिक ह्याचब्याक हुनेछ। हामी तपाईलाई बताउछौं कि यो टिजर ओलाका सीईओ द्वारा पोस्ट गरिएको थियो जब उनले विगतमा संकेत गरे कि ओला कम्पनी राइड-हेलिंग स्टार्टअपबाट इलेक्ट्रिक कार ईभी निर्माता बनेको छ।
यसअघि, ओलाका सीईओ भाविश अग्रवालले कम्पनी राइड-हेलिङ स्टार्टअपबाट विद्युतीय कार ईभी निर्मातातर्फ जाने संकेत गरेका थिए। ट्विटको जवाफ दिँदै अग्रवालले लेखे कि टाटा नेक्सन ईभी र ओला एस१ ई-स्कुटर किन्ने ग्राहकले ओला इलेक्ट्रिक कार किन्नेछन्।
कम्पनीले ओला एस१ र एस१ प्रो इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ, जुन भारतमा बनेका छन्, प्रारम्भिक चरणमा ईभी स्कुटरले निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन् । यसबाट उत्साहित भएर कम्पनीले अब विद्युतीय कारको क्षेत्रमा पनि प्रभुत्व जमाउने लक्ष्य राखेको छ । ओलाका सीईओले यसअघि नै कम्पनीले सन् २०२३ सम्ममा विद्युतीय कार लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको संकेत गरेका थिए ।
गर्दै भाविश अग्रवालले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, “यदि हामीले अर्को कार परिवर्तन गर्छौं भने त्यो ओला इलेक्ट्रिक कार हुनुपर्छ।” भारतीय बजारमा धेरै वर्षदेखि स्थापित भएको राइड-हेलिङ सर्भिस एग्रीगेटर स्टार्टअपले गत वर्ष ईभी उत्पादन व्यवसायमा प्रवेश गरेको छ।
अग्रवालले यो पनि भने कि ओलाको पहिलो इलेक्ट्रिक कार २०२३ मा आउनेछ र यो परियोजनालाई जापानको सफ्टबैंक समूहले सहयोग गर्नेछ। उनले थप जोड दिए कि कम्पनीले भारतलाई ग्लोबल इलेक्ट्रिक वाहन हब बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, ओलाले आफ्नो आगामी विद्युतीय कारको बारेमा अहिले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
ओला इलेक्ट्रिक कार पनि तमिलनाडुको EV निर्माताको कारखानामा उत्पादन हुने सम्भावना छ। तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि ओलाले आफ्नो ईभी स्कुटर यस कारखानामा उत्पादन गरिरहेको छ। भारतमा विद्युतीय सवारी साधनको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धि, आईसीई सवारीसाधनको तुलनामा ईभी सवारी साधनको सस्तो मूल्य, शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कडाइका कारणले मुलुकमा ईभी सवारी साधनको माग तीव्र गतिमा बढेको हो । देशमा विद्युतीय सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, ओलाले भर्खरै आफ्नो नयाँ विङ लन्च गर्ने संकेत गरेको छ, जुन सन् २०२३ मा आफ्नो पहिलो विद्युतीय कार लन्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।